> Resource > Video > Sida loo Beddelaan DVR in AVI
DVR, sida digital video taariikhqorihii, waa software macaamiisha qalabka korontada qalabka ama codsi ah in aad ogolaanaysaa record videos qaab digital. Haddii aad lahayd badan oo DVR qoro files, waxaa jira fursad aad rabto in aad si loogu badalo DVR in AVI u sahlan isticmaalka. Haa, AVI waa mid ka mid ah qaabab ugu weyn loo isticmaalo. Waxay leedahay taageerada ugu badan ee qalabka adag sida Blackberry, Madaxweyne Siilaanyo 360, PSP, Sandisk Sansa, Archos iyo Creative kamidka ah, iwm Iyo badan oo software sida Windows Kan sameeyey Movie iyo Adobe jilitaankii sidoo kale aqbalaan qaabka codsiga.
Arrinta No sabab waxa aad doorato in aad loogu badalo DVR in AVI, aad leedahay si aad u hesho awood leh oo si sahlan loo isticmaalo video Converter sida aad ku xigeen. Waxaan dhicin inuu yidhaahdo, Wondershare Video Converter waa mid ka mid saxda ah aad rabto. Waxa keliya ma aha kuu ogolaanaysaa inaad badalo files DVR si aad u qaab maqal ah ama video caadi ah oo ay ku jiraan AVI, laakiin sidoo kale awood u aad si toos ah loogu badalo files DVR qalabka kala duwan iyo codsiyada la saamayn saarka ugu fiican. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay sidoo kale ku siinaysaa weyn dhisay-in editor video, si aad u jar karo, dalagga, darsamaan, shaandheyn videos, ama ku darto Cinwaan, music soo jeeda, watermark, iyo cayn kasta oo saamayn iwm
Tutorial hoose waxay aad ku socon doonaa, iyada oo afar tallaabo oo diinta files DVR in avi files.
1 Import DVR files si DVR si Converter AVI
Si fudud u jiidi oo hoos u duubo DVR files ka PC in DVR in ay AVI video Converter (files kuwaas oo lagu soo bandhigi doonaa sida thumbnails in this app ee Murayaad bidix). Haddii u baahan tahay, waxaad riixi kartaa thumbnails video in ay ku eegaan files kuwan. App Tani waxay taageertaa diinta Dufcaddii. Waxaa loola jeedaa in aad dajiyaan karaa dhowr files waqti.
Fiiro gaar ah: Haddii aad qabtid qaar ka mid clips duubo DVR oo aad rabto inaad iyaga ku milmaan mid, waxaad u baahan tahay in ay sax ah "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" doorasho waqtigan.
Hit "Edit" fursad u galaan daaqadaha tafatirka ay. Markaas, waxaad:
Dalagyada: xadad madow ee video go'in, astaysto size shaashadda, shaandheyn aad video 90 darajo, iyo qabsato mugga. jar: saar clip video mid ka mid ah ku aadan rabin. Saamaynta: Codso saamayn qabow kala duwan si aad video. subtitles : In loo sahlo aad ku darto subtitles fur-in ama subtitles kartoo. Watermark: Cudarada sawir ama text watermarks in video ah.
3 Dooro AVI ama qalab aad rabto
App wuxuu taageeraa dhamaan qalabka loo jecel yahay. Waxaad dooran kartaa AVI ama qalabka sida qaab wax soo saarka. Si aad u dooran AVI, kaliya riix "Qaabka Output" hoos-hoos liiska qaab iyo ka dibna tag "qaab"> "Video"> "AVI". Haddii aad rabto in aad ka ciyaari DVR qalabka qaar ka mid ah, oo kaliya ay tagaan category Device in ay halkaas ku helaan qalab aad. Presetting default ayaa geli karaan qalabka ugu fiican.
4 Start DVR in ay diinta ka AVI
Dhinaca geeska hoose ee garabka midig ee suuqa, fudud riix "Beddelaan" button. Kolkiiba, aad ka ogaan doonto app tani waxaa la bilaabo diinta files DVR aad. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, waxa kale oo aad joojin kartaa ama yara beddelaad si fudud. Tani Converter Video ku ool ah u shaqeeyo, iyo bar ah habka buluug aad muujin doontaa horumarka qaab beddelidda.
Ka dib markii ay diinta ka, kaliya furo folder wax soo saarka si aad u ogaato faylasha la gediyay. Haddii aad u baahan tahay si ay u ciyaaro qalab aad, kaliya iyaga wareejiyo qalabka via cable.